विप्लव समूहको तारोमा पूर्व आइजीपी सर्वेन्द्र खनाल …हेर्नुहोस!
यतिबेला पूर्व आइजीपी सर्वेन्द्र खनाल वि,वादमा मुछिएका छन् । आफूलाई खनालसहित सांसदहरु महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठले महोत्तरीबाट अ,पहरण गरी काठमाडौं ल्याएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादव प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पुगिसकेका छन् ।
सांसद यादव एक्लै गएका छैनन् । उनको अघिपछि जसपा नेताहरु डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवलगायत पनि पुगिरहेका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले अ,पहरण मु,द्दा दर्ता गर्न नमानेपछि हिजो यादव राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पुगी उ,जुरी दर्ता गरेका छन् ।
उ,जुरी दर्ताप्रति विप्लव ने,तृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि खुशी व्यक्त गरेको छ । विप्लव समूहको आधिकारिक धारणा आउने गरेको इरातोखबरले मुख्य समाचार नै बनाएर कुमार पौडेल ह,त्या आ,रोपित सर्वेन्द्र खनाल वि,रुद्ध सांसद अ,पहरण मु,द्दा आयोगमा दर्ता भनेको छ ।
उसले सर्वेन्द्र खनालका अलावा बस्नेत र श्रेष्ठ मिलेर प्रलोभन र भ्र,ष्टाचार मु,द्दा लगाएर फसाउने धम्की दिएर अ,पहरण गरेको दा,बी गरेको छ ।
इरातोखबरले लेखेको छ, ‘सर्वेन्द्र खनालको प्रत्यक्ष ने,तृत्वमा परिचालित घुमुवा प्रहरीहरु कृष्णदेव (केडी) साह, श्री विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रले पौडेललाई नि,यन्त्रणमा लिएर ह,त्या गरेका थिए ।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ओली सरकारलाई खनालमाथि काबारही गर्न निर्देशन दिएपनि नगरेको इरातोखबरको तर्क छ । कुमार पौडेलको ह,त्या र अ,पराधका मुख्य दो,षी सर्वेन्द्र खनाल भनी लेख्दै हालसम्म कुनै का,रबाही नगरिएको खबर छापेको छ ।
इरातोखबरले सर्वेन्द्र खनाललाई कुमार पौडेलको ह,त्यामा संलग्न भनी किटानसहित लेख्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । खनाल विप्लव ने,तृत्वको नेकपाको तारोमा रहेको यसबाट बुझ्न सकिन्छ । उनलाई विगतमा पनि विप्लव समूहबाट सुरक्षा थ्रेट रहेको र अहिले झन् बढेको बुझिएको छ ।